လေကာမှန်မပါတဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီတန် Ferrari ကားအသစ်တွေ
3 Oct 2018 . 5:11 PM
Ferrari လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အဝါရောင်ပေါ်မှာမြင်းတစ်ကောင်ပါတဲ့ Badge နဲ့ အနီရောင် Supercar တွေကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတစ်ခေါက် Ferrari ထုတ်လိုက်တဲ့ ကားအသစ်တွေကတော့ မြင်နေကျအတိုင်း အနီရောင် မဟုတ်ပါဘူး။
Ferrari ကတော့ အီတလီနိုင်ငံရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးကား Brand တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်သလို သမိုင်းမှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံး ပြိုင်ကားတွေကို ထုတ်ပြခဲ့တာ အခုဆိုရင် Ferrari ကို Supercar ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် လူသိများနေပါပြီ။ Ferrari ရဲ့သမိုင်းထဲကား ကားတွေအတွက် အမှတ်တရအဖြစ် Monza SP1 နဲ့ SP2 ဆိုတဲ့ ကားနှစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Monza SP1 နဲ့ SP2 ကားတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၀ နဲ့ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ပြိုင်ကားတွေရဲ့ အငွေ့အသက်ကို အခုခေတ်မှာ ရနိုင်စေဖို့အတွက် သေချာ Design ဆွဲပြီး ထုတ်ပေးထားတာပါ။
The #FerrariMonzaSP1 and #FerrariMonzaSP2 made an exciting appearance at the @MondialAuto in Paris. Inspired by the sports cars that made our history, the new models areareinterpretation of timeless #Ferrari style. #MondialParis pic.twitter.com/N0FCDr4s3t
Monza SP1 နဲ့ SP2 ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ကကျင်းပနေတဲ့ Paris Auto Show မှာ ပြသထားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီကားတွေကတော့ Ferrari ရဲ့ Icona Model Limited-Edition စာရင်းထဲကို ဝင်နေပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ တရားဝင်မောင်းခွင့်ရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကားတွေဖြစ်လာပါတယ်။
V12 Engine that will produce 810HP
Monza ကားနှစ်စီးလုံးမှာတော့ 6.5 Liter V12 Engine တွေတပ်ပေးထားပြီး မြင်းကောင်ရေ ၈၁၀ အထိ ထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကတော့ Ferrari Engine တွေအားလုံးထဲမှာ မြင်းကောင်ရေစွမ်းအား အများဆုံး Engine တွေဖြစ်လာပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးကားကတော့ ဒေါ်လာ သုံးသိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိပြီး မြင်းကောင်ရေ ၇၈၉ အထိထုတ်ပေးနိုင်မယ့် Ferrari 812 Superfast ပါ။
Ferrari Monza SP1 and SP2 at Paris Auto Show
အခုထုတ်ပြထားတဲ့ Monza ကားတွေကတော့ ရပ်ထားတာကနေ မိုင် တစ်နာရီမိုင် ၆၀ အမြန်နှုန်းကို ၂.၉ စက္ကန့်အတွင်းရောက်အောင် မောင်းနိုင်မှာလို့ သိရပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီလောက်မြန်အောင်မောင်းနိုင်မယ့် Monza ကားတွေမှာ ယဉ်မောင်းအတွက် လေကာမှန်မပါပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အရင်က Ferrari ပြိုင်ကားတွေရဲ့ အငွေ့အသက်ကို ပြန်ယူထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Monza SP1 မှာတော့ ယဉ်မောင်းကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့ ခရီးသည်လိုက်စရာ ခုံအပိုမပါပေမယ့် SP2 မှာတော့ ယဉ်မောင်းရဲ့ဘေးမှာ ခရီးသည်ထိုင်နိုင်မယ့် ထိုင်ခုံနဲ့အတူ Roll Bar ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Ferrari Monza is inspired from the history of Ferrari Race Cars
ဒီ Monza ကားတွေကိုတော့ တစ်စီးကို ဒေါ်လာ ၁.၇၅ သန်းနဲ့ စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Monza SP1 နဲ့ Monza SP2 စုစုပေါင်း ၄၉၉ စီးထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကားအားလုံးကတော့ ရောင်းထွက်သွားပြီလို့ Ferrari က ကြေညာထားပါတယ်။
Ref: Fox Business | Top Gear | Car And Driver
လကောမှနျမပါတဲ့ ဒျေါလာသနျးခြီတနျ Ferrari ကားအသဈတှေ
Ferrari လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ အဝါရောငျပျေါမှာမွငျးတဈကောငျပါတဲ့ Badge နဲ့ အနီရောငျ Supercar တှကေို ပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အခုတဈခေါကျ Ferrari ထုတျလိုကျတဲ့ ကားအသဈတှကေတော့ မွငျနကေအြတိုငျး အနီရောငျ မဟုတျပါဘူး။
Ferrari ကတော့ အီတလီနိုငျငံရဲ့နာမညျအကွီးဆုံးကား Brand တှထေဲက တဈခုဖွဈသလို သမိုငျးမှာလညျး စိတျဝငျစားဖို့အကောငျးဆုံး ပွိုငျကားတှကေို ထုတျပွခဲ့တာ အခုဆိုရငျ Ferrari ကို Supercar ကုမ်ပဏီတဈခုအဖွဈ လူသိမြားနပေါပွီ။ Ferrari ရဲ့သမိုငျးထဲကား ကားတှအေတှကျ အမှတျတရအဖွဈ Monza SP1 နဲ့ SP2 ဆိုတဲ့ ကားနှဈမြိုးကို မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Monza SP1 နဲ့ SP2 ကားတှကေ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၉၄၀ နဲ့ ၁၉၅၀ ခုနှဈဝနျးကငျြလောကျက ပွိုငျကားတှရေဲ့ အငှအေ့သကျကို အခုခတျေမှာ ရနိုငျစဖေို့အတှကျ သခြော Design ဆှဲပွီး ထုတျပေးထားတာပါ။
Monza SP1 နဲ့ SP2 ကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာ ၂ ရကျနကေ့ကငျြးပနတေဲ့ Paris Auto Show မှာ ပွသထားပါသေးတယျ။ အဲ့ဒီကားတှကေတော့ Ferrari ရဲ့ Icona Model Limited-Edition စာရငျးထဲကို ဝငျနပေါတယျ။ လမျးပျေါမှာ တရားဝငျမောငျးခှငျ့ရတဲ့ စှမျးဆောငျရညျအမွငျ့ဆုံးကားတှဖွေဈလာပါတယျ။
Monza ကားနှဈစီးလုံးမှာတော့ 6.5 Liter V12 Engine တှတေပျပေးထားပွီး မွငျးကောငျရေ ၈၁၀ အထိ ထုတျပေးနိုငျမှာပါ။ ဒါကတော့ Ferrari Engine တှအေားလုံးထဲမှာ မွငျးကောငျရစှေမျးအား အမြားဆုံး Engine တှဖွေဈလာပါတယျ။ အနီးစပျဆုံးကားကတော့ ဒျေါလာ သုံးသိနျးကြျော တနျဖိုးရှိပွီး မွငျးကောငျရေ ၇၈၉ အထိထုတျပေးနိုငျမယျ့ Ferrari 812 Superfast ပါ။
အခုထုတျပွထားတဲ့ Monza ကားတှကေတော့ ရပျထားတာကနေ မိုငျ တဈနာရီမိုငျ ၆၀ အမွနျနှုနျးကို ၂.၉ စက်ကနျ့အတှငျးရောကျအောငျ မောငျးနိုငျမှာလို့ သိရပါတယျ။ ထူးခွားခကျြကတော့ ဒီလောကျမွနျအောငျမောငျးနိုငျမယျ့ Monza ကားတှမှော ယဉျမောငျးအတှကျ လကောမှနျမပါပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ အရငျက Ferrari ပွိုငျကားတှရေဲ့ အငှအေ့သကျကို ပွနျယူထားတာကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ Monza SP1 မှာတော့ ယဉျမောငျးကိုယျတိုငျကလှဲလို့ ခရီးသညျလိုကျစရာ ခုံအပိုမပါပမေယျ့ SP2 မှာတော့ ယဉျမောငျးရဲ့ဘေးမှာ ခရီးသညျထိုငျနိုငျမယျ့ ထိုငျခုံနဲ့အတူ Roll Bar ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
ဒီ Monza ကားတှကေိုတော့ တဈစီးကို ဒျေါလာ ၁.၇၅ သနျးနဲ့ စတငျရောငျးခသြှားမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ Monza SP1 နဲ့ Monza SP2 စုစုပေါငျး ၄၉၉ စီးထုတျလုပျသှားမှာဖွဈပွီး ကားအားလုံးကတော့ ရောငျးထှကျသှားပွီလို့ Ferrari က ကွညောထားပါတယျ။